Indawo yekhofi enomuzwa omnandi ayeyijwayele phesheya yenza wafisa ukuba nendawo efanayo eNingizimu Afrika. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu u-Itumeleng Hlapane usungule iShape Café, inkampani evubela ikhofi. Manje usenamagatsha amane ezitolo ezidayisa ikhofi lakhe – okungamabili Emfuleni, elilodwa eSouthgate Mall naseNewtown.
Elinye lamakhofi enziwa eShape Café
UHlapane, waseVereeniging, eGoli, uqale leli bhizinisi ngo-2010 kodwa lawa ngo-2011 ngenxa yobudedengu. Uthi: “Ngangiyiciko, ngilingisa emidlalweni yeshashalazi, kunesitolo esidayisa ikhofi engangivame ukuya kusona ngisahlala eFrance.
“Kuleso sitolo babevame ukwenza imicimbi, bemema izimbongi, abadlala izinsimbi nabadwebi. Kwakuba wumuzwa omnandi kangangokuthi nami ngaze ngafisa ukuthi ngenze kabusha indawo enomuzwa onjengalowa”, kulanda yena.
Ngenxa yothando analo lwekhofi uphinde wazama futhi, wavula isitolo sekhofi ngaseGandhi Square nobekuvame ukufika kusona abangani bakhe abangosaziwayo. Izinto ziphinde azangahamba kahle ngenxa yamaphutha.
“Ibhizinisi lami labulawa wukungabi nolwazi lwamabhizinisi. Bekuke kwenzeke ngifike esitolo noma yingasiphi isikhathi engithanda ukufika ngaso, ngenziwa yinkolelo yokuthi ngingenza noma yini, noma yinini. Kwesinye isikhathi bekwenzeka ngiphisane ngekhofi nokudla kubangani bami ngenziwa wukungabi nambono ngebhizinisi lami, kokunye ngiye kongcebeleka lisale kanjalo ibhizinisi linganakwe muntu,” kukhumbula uHlapane.
Uthi usizwe wukuhlangana ne-lecturer yakhe eyayisebenza eRand Merchant Bank, yamsiza ngamasu okuchumisa ibhizinisi. Uthi: “Wanginika ithuba lokucijwa eGordon Institute of Business Science ngoba ekholwa wukuthi ngingenza okungaphezu kokuba yiciko. Nangempela ngalibamba ngezandla zombili lelo thuba ngafunda ngamabhizinisi ngo-2015.”
Ulwazi aluthola lapho lwamkhuthaza ukuvusa ibhizinisi lakhe. Ngo-2016 ubhalise iShape Café, kwathi ngo-2017 wavula igatsha layo lokuqala eSebokeng, walandelisa ngenye eSouthgate Mall.
Manje isinamagatsha amane kodwa konke loko akwenzekanga kalula njengoba ethi naye njengabanye osomabhizinisi kumkhinyabeze kakhulu ukubheduka kweCOVID-19 ezweni nezibhelu zokutapa izimpahla ngonyaka odlule.
“Ngishayeke kakhulu ngenxa yeCOVID-19, ngaze ngasizwa wukuthi bengilandela yonke imithetho yokuphatha ibhizinisi. Loko kwenza ukuthi ngixhaswe yiSouth African Relief Fund, yi-Avbob ne-Unemployment Insurance Fund,” kusho yena.
UHlapane uzibambela mathupha ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende aphatheke kahle
Okwamanje eShape Café uqashe izisebenzi eziwu-15. Utshala imali kwamanye amabhizinisi asafufusa okubalwa kuwona isiteshi somsakazo esi-online namabhizinisi ezimpahla zokugqoka.
“Uhlelo lwethu lweminyaka ewu-10 wukuthi sigcine sinamagatsha amaningi kuleli zwe nase-Afrika jikelele, siphinde siqhubeke nokutshala emabhizinisini asafufusa amaningi,” kuphetha uHlapane.
Facebook: SHAPE Café/Itumeleng Hlapane